ခရီးစဉ် Lee ကများ၏အနာဂတ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ wrote ဒါကြောင့်ဖွင့် အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, ငါ၏အနောက်ကွယ်ကသတင်းစကားသို့နက်ရ​​ှိုင်း dives တဲ့စာအုပ် စံချိန် တူညီသောခေါင်းစဉ်၏. ငါနောက်ဆုံးပြိုလဲကြေညာခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါမဖြစ်ရပြီအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်တာခရီးသွားလာမရမယ်လို့လည်းဖွင့်. ငါသစ္စာရှိသောသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ, နှင့်သာတကယ်ဒေသခံတစ်ဦးအသင်းတော်များ၏အခြေအနေတွင်ဖွစျနိုငျ. ဒါနဲ့ဝါရှင်တန်၌ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဓမ္မဆရာများကနေလေ့လာသင်ယူမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကိုယူပြီးတာပါ, DC က. ဆန္ဒရှိသခင်ဘုရား, ငါသည်ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဝန်ထမ်းများအပေါ်အစေခံအဖြစ်, ငါသည်လည်းဒေသခံဓမ်မအမှု၌ငါရေရှည်အစေခံရန်လိုအပ်သည့် tools တွေကိုပိုမိုတိုးတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
ငါကောင်းမွန်သောနေ့ရက်မတိုင်မီဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခငျသညျကိုးစားတာပါ, နှင့်မစိုးရိမ်ပါ - သင်သည်ငါ့ထံမ​​ှပိုပြီးအများကြီးကြားနာခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းမှဂီတကိုရေးသားဟောပြောမှ. ငါသည်လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာအားလုံးသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, သင်တို့ကိုငါမယ့်လမ်းပေါ်မှာငါ့ကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်.
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒံယလေသ Blagrove • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဲလက်စ် • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 1:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပထမတော့ကျွန်မသူအနားယူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်. ငါသည်သူ၏အဟောင်းများကိုသီချင်းများနားထောင်ရန်အခုတော့အခါတိုင်း, ငါနဲ့တူတယ်… သူပြန်လာမယ့်, သူကမပေးလည်းလမ်းလည်းကောင်းပါတယ်. နေဆဲငါ့အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တဦး.
Cguerrido • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုကတရားဟောဆရာများနှင့်ပထမဦးဆုံးအသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်တပါးသောဘုရားတို့ကိုစကားလုံးချပြီးအားမိမိအဓိကအာရုံစိုက်အဖြစ်ဂီတအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှဆင်းနင်း၏အချက်မှဘုရားကိုလိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသူသည်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးကိုမြင်သည်ကြီး. သငျသညျပြီးသားသင်သိသင့်ရဲ့ဂီတနဲ့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်, ယခုက၎င်း၏တစ်ဦး musicless သီချင်း.
ချားလ်စ်အပြင်ဘက်တွင် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်၏မာနထောင်လွှား im,သူကယ့်ကိုရရှိသွားတဲ့လူငယ်တစ်ဦး God.He ကောင်းမွန်သောအလုပ်ခရီးစဉ်တက် God.Keep အသက်ရှင်ဘို့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိသွားတဲ့ ;)
Antoine Mason ဆို • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခရီးစဉ်တစ်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသံသယ. သူကသိပ်ခရစ်တော်သည်အရက်ပ်ကိုချစ်သောသူ. သူဖွင့်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ.
Vinny_uk • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူကတကယ်သူ့ကိုကောင်းသော bro ကြည့်ရှုစေရန်မည်သူမဆိုမလိုအပ်ပါဘူး, ရိုးရိုးသားသား…
Malak • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျတရားအဘို့အဘယ်သူစကားကိုနားထောငျကွပါ? ငါ Piper ရဲ့အလုပ်ရောကျရဲ့အလုပ်အတွက် interwoven တွေ့မြင်, ကိန်းဂဏန်းများအခြားဘယ်လိုကြင်နာသငျသညျအညီကျမ်းစာလာသည်အပေါ်လှုံ့ဆော်မှု / သစ္စာဉာဏ်အလင်းအဘို့ကိုနားထောင်ကြဘူး?
ဧဖရိမ်အမျိုး Franklin • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Ggf2005 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Malak • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူပြီးသားအတော်ကြာတရားပြုသောအမှုဖွင့်, သငျသညျ Youtube ကိုပေါ်သူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ.
Jeremydaniel95 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Judith Amulen • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မာကုကို Block • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မကြာမီသင့်ထံမှနောက်ထပ်ကြားနာရန်မျှော်လင့်, ဖြစ်မည်အကြောင်းသမျှ form မှာ.
Marc 1ceDark Savage • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သခင်ဘုရား၌အလုပျကိုဆက်လက်တံ့သောအရာကိုရန်နှင့်သင့်အားဖြင့်မျှော်လင့်, bro. အလွန်ကောင်းမွန်သော.
ဂျိမ်း Aggrey • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Matt Smethurst • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Capitol Hill နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း (www.capitolhillbaptist.org)
Anthony_Nickens • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျိန်းသေနားလည်, တစ်ဦးသိုးထိန်း၏ခေါ်ဆိုမှုသည်သူ၏ချက်ချင်းသိုးတော်စုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ငါ့အသင်းတွင် Kansas City မှာရှိတဲ့နယူးဗေသလမြို့ဘုရားကျောင်းမှာကွန်ဖရရှိခြင်းနေ, ထနှင့်လာမယ့်ဓမ္မဆရာများမှအထူးသဖြင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံ Kansas ပြည်နယ်. ငါ၏အသင်းအုပ်ဆရာ Suff. ဆရာတော်တစ်ဦးက. Glenn Brady ဟာအကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူတို့၏ဘဝများအဘို့ဘုရားသခငျ့ကောငျးခြီးစည်းစိမ်သို့လူတွေကိုတွန်းအားပေးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ FB ပေါ်မှာသူ့ကိုဖွင့်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်!
Travis Nunnjr40 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Angela တစ်ဦးက. Spencer-Mukes • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟောပြောခြင်းဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်သွယ်ကြောင်းရုံသတိရ, သို့သော်သင်သည်ထိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေး. အစဉ်မပြတ်ငါသင့်ရဲ့ဂီတအံ့သြဖွယ်တရားဖြစ်တွေ့ကြပြီ. ကျွန်တော်တစ်ဦး '' ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထင်အကြိမ်တစ်ဦးကအများကြီး’ ကျနော်တို့စံတရားဟောဆရာအခန်းကဏ္ဍပြုပါရန်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်, အဘယ်အရာကိုသူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါတို့လက်လုပ်ကိုရှာဖွေကားအဘယ်သို့သောအခါ.
footeus • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာတကယ်ငါ့ကိုမအံ့သြခဲ့ပါဘူး. ငါ dude ၏နှလုံးကိုခေါ်ဆိုသည်အဘယ်မှာရှိကြောင်းဖွင့်မြင်နိုင်ပါသည်. သူကမှစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုနှင့်ငါသည်ဘုရားသခင်၏ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုသူ့အဘို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ. ထိုမင်းသည်နှိမ့်ချအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်း. ငါသည်သူ၏ဝတ်ထားတာကြောင့်ရယ်စရာဒါဟာင် “ငါသည်ငါ၏သခင်ဘုရားအပေါ်ဝါကွှားနိုင်သလား?” လက်ပတ်. ငါဘုန်းအသရေရဘို့ငါကအားလုံးပေါ့ပါလိမ့်မယ်သိသောင်. သွားကြရအောင်!!!!!
ရှင်ပေါလု horn • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုက်အဖြစ်ဘုရားသခငျသညျသငျသညျညီအစျကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ. ငါသည်သင်တို့၏ဂီတခံစားကြနှင့်သင့်ဘာသာရေးတင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါသည်. ငါထာဝရဘုရားသည်သင်၏အလုပ်ကတဆင့်ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခံရဖို့ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်.
ဖေါ်ပြ: ငါအွန်လိုင်း Read အဘယျသို့ – 08/20/2013 (နံနက်။) | Emeth Aletheia
CherishJesusLuv • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 5:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟေဗြဲ 12:1-2 ကိုမြင်လျှင်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်လည်းမျက်မြင်သက်သေများ၏ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောမိုဃ်းတိမ်နှင့်အတူအကြောင်းကိုဝန်းရံနေကြသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်တိုင်းအလေးချိန်ကိုတင်ကြကုန်အံ့, ဒါတတ်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေကိုအလွယ်တကူဝိုင်း [ကျွန်တော်တို့ကို], ငါတို့ကိုသည်းခံခြင်းနှင့်အတူငါတို့ရှေ့မှာသတ်မှတ်ထားသောအပြေးပြိုင်ပွဲကို run ပါစေ, ယရှေုထံသို့၏စာရေးဆရာနဲ့ပြီးရှာဖွေနေ [ကျွန်တော်တို့၏] ယုံကြည်ခြင်း; သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ကြံ့ကြံ့ခံရှေ့၌သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းအဘယ်သူသည်, အရှက်ကွဲ despising, ဘုရားသခငျ၏ရာဇပလ္လင်၏လက်ျာဘက်၌နှိမ့်ချသတ်မှတ်.
tina • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 10:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်တို့နှင့်အတူရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းခရီးစဉ်! သင့်ရဲ့စာအုပ်နှင့်သင့်တရားဒေသနာရန်သင့်ဂီတကနေသင်တို့ကိုကြားနာ Luv. ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်သောသခင်ဘုရားသည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုဆက်လက်စေသော.
ကျနော်တို့တွေ့လိုက် • စက်တင်ဘာလ 26, 2013 တွင် 5:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အရမ်းခရီးစဉ် Lee က၏ဂီတ curtu နှင့်သူ့ကိုဘရာဇီးအတွက်မနာသီချင်းဆိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်.
ယ်ယူရန် • နိုဝင်ဘာလ 19, 2013 တွင် 9:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ur ဂီတသငျသညျကိုပယ်ရန်အဘို့အဖွင့်လွန်းသည်ကောင်း! သင့်ရဲ့ဂီတသင့်ရဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်…..ဒါကြောင့်ပင်သင်သတိမထားမိသောအချက်မှအသက်ဝိညာဉ်၏ alot ထိ. ဒါဟာအယ်လ်ဘမ်ရောင်းချမှုတွင်ထင်ဟပ်မည်မဟုတ်ပါ, ဂရမ်မီ, ယင်း၏သူ၏ဘုန်းအသရေကိုရှိုးထုတ်ရောင်းချခဲ့ပေမယ့်ငါသိ၏. သင်ထဘောငျအဆင်ပြေသညျယရှေုကိုရှာမရကြဘူးဆိုပါတယ်လိုပဲ, ကမတည်ရှိပါဘူး. ဂီတ၏ခံယူချက်သို့မဟုတ်မေတ္တာအလုံအလောက်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်သို့ကိုတူးမယ်ဆိုရင်ဒီပြောပါလိမ့်မယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုပြန်ဖွစျလိမျ့မညျကိုသိ! ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသောသာသနာပြုစဉျးစားကွညျ့နဲ့ခရစ်တော်အဘို့ဤနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်သတ်ပစ်…..သူတို့ကိုငါများစွာသောနှစ်သိမ့်ရှိသူတို့၏ဒေသခံအသင်းတော်များမှပြန်လာ၏ထင်သိကြ! သူတို့ကရဲရင့်စစ်သားများမှာ…..သူရဲ….ကိုယ့်ကိုအခြားထက်ပိုသူတို့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ် “ကလစ်” ခရစ်တော်အား….သူတို့ကအမှန်တကယ်ရှိပါတယ် “unashamed”!